Daraasadaha farshaxanka Ghostwriter Waxaan darajooyin sare ka qaatay barashada waraaqaha
Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi waxay leeyihiin aqoonta loo baahan yahay xagga farshaxanka
Qof kasta oo baranaya farshaxanka wuxuu u baahan yahay himilo badan iyo xamaasad badan. Barashada farshaxanka waxaa lagu dhameystiri karaa mid waqti buuxa ama mid dhiman ah. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa lagaa rabaa inaad goobjoog ka ahaato goobta waxbarashada. Shuruudda aasaasiga ah ee tan ayaa ah in la helo amar ugu yaraan hal luqad ajnabi ah - ugu horrayn Ingiriis - ugu yaraan laba ayaa ka fiican. I.e. Qof kasta oo amar ku leh luuqada Faransiiska, ha ahaato mid lagu hadlo ama la qoro, oo uu dareemo inuu gurigiisa ku joogo luqadda, waxaa hubaal ah inuu yeelan doono rajo wanaagsan inta lagu jiro iyo ka dib waxbarashadiisa. Barashada fanka waxaa ka mid ah mowduucyada Taariikhda fanka iyo aragtida farshaxanka sidoo kale wejiyada badan ee farshaxanka - farshaxan, rinjiyeynta dhammaan farsamooyinka la qaadan karo, dhismaha. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dabcan warbaahinta tiknoolajiyada kombiyuutarka / farshaxanka, filimka iyo sawir qaadista. Ilaalinta iyo dib u soo celinta ayaa sidoo kale muhiimad gaar ah siinaya barashada fanka. Waxaa jira takhasusyo badan oo ardaydu kala dooran karaan. Takhasus kasta waxaa jira maadooyin badan oo ay tahay inaad si buuxda xoogga u saarto. Wax badan ayaan kaa qaban karnaa si aan kaaga caawino inaad sare u qaaddo darajooyinkaaga. Na kaxayso Kontakt on ama rufen Hada nala soo xiriir. Waxaan qaban karnaa howshaada isla markiiba oo adiga ayaan kuu qaban karnaa shaqada.
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista waxayna leeyihiin shahaado maadadooda ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Haddii aad u barato farshaxanka maaddo labaad, waqtigaaga qiimaha badan ayaa xitaa ka sii xaddidan. Farxadda ardayda, qoyska iyo / ama hiwaayad ahaan suurtagal ma aha in mar dambe la helo.
Maadooyinka soo socdaa waa inta lagu jiro Daraasadaha farshaxanka inaad ku gudubto iyadoo kuxiran maadada ama maadada aad qaadatay:
farshaxanka lagu dabaqay
Taariikhda guud ee fanka
unsere Ghostwriter waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah dhinacooda cilmi baarista waxayna siin kartaa ardayda inay si cad uga faa'iidaystaan ​​asxaabtooda. Suurtagal ma ahan in ardayda ay helaan khibrada khibradeed ee qoraaga cirfiidka oo muddo dheer taagnaa mowduucooda dhowr toddobaad. The Bachelor waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan.
Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag tacliintaada Shaqada guriga qor.
Qoraalka ghost ee farshaxanka
Bachelor-ka iyo maadooyinka mastarka ayaa looga baahan yahay jaamacadaha daraasaddaada farshaxanka. Qormo-qore waa hal dariiqo oo si guul leh loogu xaliyo dhibaatooyinkaas. Waxaan ka shaqeyn karnaa su'aasha shaqada adiga. Suugaanta sidoo kale adiga ayaa laguugu baari doonaa. Farshaxan ahaan, way adagtahay inaad waqti uhesho shaqooyinka maadaama aad kujirto mashaariic badan oo ubaahan dareenkaaga oo buuxa. Way ku sii adkaaneysaa qoraalka bachelor-ka dhibaatooyinka.
Taariikhda iyo taariikhda fanka dhowr jeer ayey isbedeleen qarniyo badan. Laga bilaabo Masriyiintii iyo sawiradoodii Ahraamta ilaa sawir gacmeedyada hadda ka jira Louvre. Shaqada farshaxanka ayaa si isdaba joog ah isu beddeleysa isla markaana si isdaba joog ah isu soo celinaysa. Si aad si guul leh ugu barato taariikhda fanka, waa inaad aqbashaa caawimaad. Shaqada tacliimeed, waa inaad u kireysataa hay'addeena ghostwriter iyo shaqadaada oo kale shahaadada bachelor, shahaadada Masterka ama qoraalkaaga la qoro.
Falsafada ka sokow, farshaxannimadu waa edbin cilmiyeed caan ah. Si kastaba ha noqotee, farshaxanka ayaa sidoo kale isku xira falsafada. Waxaa jira sabab ay koorsada Falsafadda iyo Taariikhda Farshaxanka u jirtaa. Labadan qaybood ee cilmi-baaristu waxay leeyihiin xaddi aad u tiro badan oo is-dhaafsi ah. Waxyaabaha kale, waxaa jiri lahaa Rome qadiimiga ah oo leh Filosoofyada Griigga Aristotle, Democritus, Heraclitus iyo Plato si aad u wacdo Faylasuufyadan caanka ah ayaa caan ku ah qof walba. Waa inaad aqbashaa caawimaad si aad usii wado cilmi baarista aaggan aqoonta. Qoraa-aqoonyahankeenna cilmiga leh wuxuu kuu qaban doonaa shaqada oo wuxuu gaarsiin doonaa shaqadaada.
Goobta farshaxanka ee ganacsiyada ganacsiga
Markaad dhamaysato shahaadadaada waxaa jira fursado badan. Tusaale ahaan, waxaad u shaqeyn kartaa sidii shirkad madaxbanaan ama dhisi kartaa ganacsi kuu gaar ah. Waxaad sidoo kale ku biirin kartaa xirfadahaaga shaqaale ahaan shirkad. Waxaa jira shaqo-bixiyeyaal badan oo suurtagal ah adiga qalin-jabiya ahaan Meelaha caadiga ah ee shaqada ee qalin-jabiyaha waa maalmahan
Machadka cilmi baarista
Shirkadaha ganacsigu sidoo kale wey qiimeeyaan qalabka ka jira xafiisyada xafiisyada, tusaale ahaan, waxayna ku bixiyaan lacag. Hadaad Shaqooyinka farshaxanka sameynta iyaga oo aad ka iibiso shirkadaha ama matxafyada ayaa kaa heli kara sharaf badan. Marka waad u oggolaan kartaa xarragadaada farshaxan inay bilaash ku socoto. Si aad waqti ugu heshid himilooyinkaaga farshaxanimo, waa inaad u dirtaa qoraalkaaga cilmiyaysan qoraaladeenna ghostwriters übergeben.
Hubinta tayada ee barashada cilmiga farshaxanka